Akanjo denim ho an'ny tsiro rehetra | Bezzia
Akanjo denim ho an'ny tsiro rehetra
Maria vazquez | 22/07/2021 18:00 | Inona no hotafiko
Amin'ity vanim-potoana ity dia tsy ho mora ny mahita azy lobaka denim amin'ny katalaogy lamaody. Tsy te hilaza izahay fa tsy misy, saingy tsy fironana izy ireo ary noho izany dia mitana toerana faharoa. Na eo aza izany, any Bezzia izahay dia manohy miloka an'ity akanjo ity noho ny fahaizany mahay.
Amin'ny lobaka, amin'ny akanjo lava, amin'ny palitao ... ny denim shirt dia mety handrakotra asa samihafa arakaraka ny fotoan'ny taona sy ny toetr'andro. Loharanom-pitaovana lehibe ao anaty valizy izy ireo Ary amin'ity vanim-potoana ity dia afaka misafidy tolo-kevitra roa tena samy hafa ianao, miankina amin'ny famoronana endrika mahazatra na lamaody ianao.
1 Akanjo mahazatra
Raha mitady akanjo tsy manam-potoana sy marobe ianao, ny mifidy akanjo denim mahazatra no safidy tsara indrindra. Vita amin'ny landihazo, miaraka amin'ny paosy boribory boribory sy eo anoloana, ho hitanao izy ireo amin'ny alokaloka maro karazana. Tadiavo ao amin'ny Massimo Dutti (ambanin'ity fehintsoratra ity) sy ao amin'ny Zara (eo amin'ny fonony) amin'ny endriny be loatra.
Azontsika atao koa ny mampiditra an'ity vondrona kilasika ity ny akanjo miaraka a basika maizina kokoa, mifanohitra amin'izany, izay ho hitanao amidy amin'ny Free People. Fampivoarana vaovao sy mahazatra, miaraka amin'izay, miaraka amina endrika milamina sy tsara ampifangaroana ny pataloha jeans.
Inona avy ireo singa tokony ho tadiavintsika amin'ny lobaka denim mba hahafahana milaza fa mifanaraka amin'ny fironana ankehitriny? Tanana vita amin'ny volony Izy ireo, mazava ho azy, no ohatra miharihary indrindra ary tsy tianay ny tolokevitra Massimo Dutti natao tao amin'ny Lyocell maharitra maharitra 100%.
Ruffles sy collar garter dia singa hafa mamela antsika hanasokajiana ireo lobaka ireo ho "lamaody". Ao amin'ny Free People dia afaka mahita ohatra maromaro amin'ity karazana ity ianao; Avy amin'ny endriny mahazatra tonga lafatra mba hisarihana ny saina amin'ity akanjo manokana ity. Ahoana raha manampy loko hafa koa isika? Lilac no safidy tsara indrindra ho azy, tsy isalasalana!
Karazan'akanjo denim inona no tianao indrindra?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » lamaody » Inona no hotafiko » Akanjo denim ho an'ny tsiro rehetra
Ahoana ny fanitsiana ny volo amin'ny lafarinina katsaka